Uncategorized Archives - PARIJATMEDIA
Jul32020 by adminNo Comments
नेपाली चेलीले अस्ट्रेलियामा लुटेरालाई लखेट्दा विश्वभर चर्चा (भिडियो)
सिड्नी: अस्ट्रेलियामा एक नेपाली युवती अहिले निकै चर्चा रहेकाे छ । उनले लु’ट्न आएको लु’टेरालाई च’क्कु देखाएर धपाएपछि उनको सर्वत्र चर्चा पाएकि छिन् । उनले नेपाली विर गाेर्खाली हुन् भनेर चिनाएकी छिन् । उनले गरेकाे त्याे चक्कु प्र’हारबाट विर गाेर्खाली हाै भनेर चिनाएकी छिन् । न्यु साउथ वेल्सको अबर्नमा रहेको मार्टमा काम गर्दागर्दै लुटेरा मार्टभित्र छिरेर नेपाली युवती पवित्रा कार्कीलाई ड’र देखाउँदै पैसा मागेको थियो। तर पवित्रा कार्कीले भान्सामा प्रयोग गरिने च’क्कु देखाउँदै लु’टेरालाई नै भगाइदिइन्। स्थानिय मिडियाले उनलाई साहसी युवतीको रुपमा चि’त्रित गर्दै घट’नाको बारेमा समाचार प्रकाशन गरेका छन्। अहिले उनकाे निकै चर्चा रहेकाे छ । उनले गरेकाे त्याे प्रहार सिसि क्यामारमा रेकड भएकाे थियाे । भिडियाेः
७ किसिमको हुन्छन् यौ’न साथी, तपाईका साथी कस्ता ?
दाम्पत्य सम्बन्ध कति सुमधुर छ भन्ने कुरा उनीहरुको यौ’न जीवनले पनि निर्धारण गर्छ । सफल यौ’न जीवनले दम्पतीको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने मात्र होइन, निरोगी पनि हुन्छ । तर, यसका लागि त्यो यौ’न क्रि’या रचनात्मक र सक्रिय हुनुपर्छ । यौ-नका बिभिन्न तौर तरिका, विधी हुन्छन् । शारी’रिक तथा मान’सिक त’नाव हटाउने विधी पनि हो, यौ’न । यौ’न शा’रीरिक क्रि’या भएपनि यसमा भावना जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यौ’न क्रि’या र त्यसबाट लिने सन्तु’ष्टि सबैमा एकरुपता हुँदैन ।यौ’न साथी एकैखाले हुँदैनन्, धेरै थरीका हुन्छन् । खासगरी पार्टनरको सोचाई, बुझाई आदिले यसमा खास भूमिका खेल्छ। याै’नसाथी खास गरेर ७ प्रकार हुन्छन । ती यस प्रकार छन् । उदासिन पार्ट’नर कति दम्पती यस्ता हुन्छन्, जसको यौ’न जीवन एकदमै खल्लो हुन्छ । कामको बोझ, पारिवारिक त’नाव, रो’ग, सम्बन्ध अदिको कारण उनीहरुमा यौ’नप्रति कुनै रुची हुँदैन । यौ’न मनोविज्ञहरु
डब्ल्यूएचओले भन्यो कोरोनाको महामारीको सबैभन्दा खराब समय आउनै बाँकी
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोभिड १९ को महामारीको अझैं खराब रुप देखिने बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस एडनहम गेब्रियाससले सो कुरा बताएका हुन् । प्रमुख गेब्रियाससले संसारभरीका सरकारले सही नीतिको पालना नगरेको खण्डमा भाइरसले थप व्यक्तिलाई संक्रमित गर्न सक्ने बताए । सोमबार एक भचुअल ब्रिफिङमा टेड्रोसले भने, ‘हामी सबै यो चाँडै नै उन्मुलन होस् भन्ने चाहन्छौं ।हामी सबै आफ्नो दैनिक काम कारवाहीमा फिर्ता हुन चाहन्छौं तर तितो सत्य यो हो कि हामी अहिले पनि यो महामारी उन्मुलन हुने यात्रामा निकै टाढा छौं ।’ ‘यद्यपि, केही देशले प्रगति गरेका छन् तर विश्वव्यापी स्तरमा महामारी फैलने गती तीब्र भइरहेको छ । संसारभरी १ करोड संक्रमित र पाँच लाख व्यक्तिको मृत्युपछि पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भाइरस फैलन पहिचान गरेका समस्या जस्तै राष्ट्रिय एकतामा कमी, विश्वव्यापी एकजुटताम
यी ५ अंगमा कोठी हुनेहरु हुन्छन् अत्याधिक का’मुक !
हस्तरेखा विज्ञानले हातका रेखा मात्र नभएर शरीरका अन्य अंगमा हुने बनावट र चिन्हकोबारेमा पनि चर्चा गरेको छ । समुन्द्र शास्त्र पनि भनिने यो शास्त्रले शरीरमा हुने कोठी र मुसाको अर्थ समेत बताएको छ । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार शरीरका कतिपय अंगमा भएका कोठीले त्यस्ता ब्यक्ति अत्याधिक कामुक हुने संकेत गर्छ । यस्ता ब्यक्तिलाई कामकुतका कारण समस्या समेत हुने समुन्द्र शास्त्रको दावी छ । कुन अंगमा कोठी हुने ब्यक्ति का’मुक? १- यदि ओंठमा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्ति अत्याधिक का’मुक हुन्छ । माथिल्लो ओंठमा हुने कोठीलाई कामदेवको बास नै मानिन्छ । यस्तो कोठीले अत्याधिक का’मुकताको संकेत दिन्छ । २. शुक्र पर्वत अर्थात हत्केलाको बुढी औंलाको फेंदमा कोठी छ भने त्यस्ता ब्यक्तिमा पनि अत्याधिक का’मुक हुन्छन् । उनीहरुको धेरै ब्यक्तिसँग प्रेम र यौ’न सम्ब’न्ध हुन सक्ने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । ३- दायाँ आ
फ्यानको दिल धड्काउने अनन्या पाण्डेको सुन्दरता [फोटो फिचर]
बलिउड नायिका अनन्या पाण्डेलाई डेब्यु फिल्मले नै चर्चामा ल्यायो । टाइगर श्राफसँग चलचित्र ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर २’ मार्फत बलिउड फिल्ममा डेब्यु गरेकी अनन्याले लाखौँ फ्यान कमाइसकेकी छिन् । तर उक्त फिल्मले भने व्यावसायिक सफलता हात पारेन । अनन्या आफ्नो सुन्दरताका कारण सधै चर्चामा छिन् । चर्चित कलाकार चंकी पाण्डेकी छोरी अनन्या त्यसपछि चलचित्र ‘पति पत्नी और मे’ मा अभिनय गरिन । सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहने अनन्या आफ्ना फ्यानमाझ नयाँ तस्वीरका माध्यमबाट अपडेटमा रहने गर्छिन् । फ्यानहरू उनको सुन्दरताको खुलेर तारिफ गरिरहन्छन् । लकडाउनको समयमा पनि उनले लगतार सुन्दर तस्बिर शेयर गरेर फ्यानसँग जोडिरहेकी छिन् । हेराैँ तस्वीरमा अनन्याको सुन्दरता:
अभिनेता गोविन्दा’का छोरा सवार कार दुर्घ’टना
काठमाडौं। बलिउडका चर्चित अभिनेता गोविन्दाको कार दुर्घट’नामा परेका छ । भारतिय मिडियाका अनुसार अभिनेता गोविन्दाका छोरा यशवर्धन आहुजा रहेको कार दु’र्घटनामा परेको हो । दुर्घ’टनामा परेको उक्त कारमा गोविन्दाका छोरा यशवर्धन र चालक रहेको बतायएको छ । बुधबार राति साढे ८ बजे कारलाई यशराज ब्यानरसँग आबद्ध एक व्यक्तिको गाडीले ठ’क्कर दिएको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ । दुर्घटनामा दुबै गाडीमा सवारको सामान्य चो’ट मात्र लागेको बताइएको छ। राती मोबाईल प्रयोग गर्दा हुने हानीहरु छोटकरीमा तौल बढ्ने सुत्ने बेलामा मोबाईल फोन प्रयोग गर्नाले मेटाबलिज्म प्रोसेसमा असर पर्छ । जसले गर्दा हाम्रो तौल बढ्छ । समस्या समाधानमा कठीन सुत्ने बेलामा मोबाईल प्रयोग गर्नाले हामी त थाक्छौ नै यसका साथै हाम्रो ब्रेन पनि थाक्ने गर्छ । जसका कारण कुनै पनि समस्याको सजिलै समाधान निकाल्न सकिदैन । हामीमा सोच्ने शक्तिको कमी हुन
गृह मन्त्रालय’द्धारा सबै सवा’री पास ‘खारेज’ !
गृह मन्त्रालयले निजी सवारी साधनलाई दिएको सबै सवारी पास खा’रेज गर्ने निर्णय गरेको छ । जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिएसँगै सबै पास खा’रेज गरिएको हो । लकडाउन खुकुलो बनाएपछि पासले जोर विजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा समेत अप्ठ्या’रो भएकाले खा’रेज गरिएको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बताए ।
Jun142020 by adminNo Comments
सुशान्तका काकाले भने- ‘उस्लाई मारिएको हो पुलिसले अनुसन्धान गरोस्’
सुशान्त सिंह राजपुतको काकाले सुशान्तले आ त्माह त्या गर्न नसक्ने बताएका छन् । भारतीय संचारमाध्यम इन्डिया टिभीका अनुशार उनले यो खबर झुट रहेको बताएका हुन् । “सुशान्त सु-साइडको बिरुद्धमा बोल्ने मान्छे हो, उस्ले यस्तो काम गर्न नै सक्दैन पुलिसले यो केशलाई गम्भीरता पुर्वक लिएर छानबिन गरोस ।” यो खबर सुनेपछि उनको बुवा बेहो’स अवस्थामा छन् भने ४ जना दिदीहरुले उनको ला’सलाई हेरेर रुदै बसेका छन् । प्रहरीले कुनै नोट नभेटेको बताएको छ । उनका साथीहरुले ढोका ढ्कढ्काउँदा नखोलेपछि ढोका फुटाएर हेरेको बताइएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित भएको समाचार अनुसार मुम्बइमा रहेको आफ्नै निवासमा उनले आ त्मह त्या गरेका हुन् । उनी ३४ वर्षका मात्र थिए । जी टिभीको लोकप्रिय टेलिचलचित्र पवित्र रिश्ताबाट उदाएका राजपुतले सन् २०१३ मा ‘काइपोचे’ फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यु गरेका हुन् । । पछिल्लो समयमा उन
नेपाल’ले आफ्नै भुमी मागेको हो, रुवाबा’सी गर्नुको कुनै औचित्य छैन, पूर्व भारतीय राजदुत।
काठमाडौं – नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदले नेपाल–भारत सीमा वि’वाद बढ्नुमा मुख्य ग’ल्ती भारतको भएको दा’बी गरेका छन् `। बिबिसी हिन्दीसगँ कुरा गर्दै सुदले भिडियो वा टेलिफोनमा सचिव स्तरमा बार्ता हुन सक्ने थियो भन्दै वार्ता नभई अर्कोतिर सडकनै रक्षा मन्त्रीले उदघाटन गरे पछि भारतले बार्ता टारेको नेपाललाई विस्वास भएकाले नक्सा जारी गरेको हुन सक्ने उनले बताए `। उनले नेपाललाई लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको मामलामा चीनले कहिले पनि साथ नदिएको भन्दै नेपालले चीनको उक्साहटमा नक्सा जारी गरेकोमा आफूलाई विस्वास नलागेको बताए ।`यस अघि भारतीय मिडियाबाट निरन्तर चीनको काखमा पुगेर नेपालले सीमा बि’बाद उठाएको दा’वी गर्दै आएको थियो ।यसलाई राजनीतिक स्तरमा लगेर नेपाल र भारतले समाधान गर्नु पर्ने सुदको तर्क छ `। उनका अनुसार चीन र भारतबीच भएका सम्झौताहरु स्मरण गराउँदै सुदले सन् २०१५ मा भारतका प्रधानम
कोरोना’ले ज्यान गुमाउने’को संख्या १८ पुग्यो : ९१३ डिस्चार्ज
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कै कारण दुई जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पर्साका एक पुरुष र बाराका एक बालकको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको शनिबार पुष्टि गरेका हुन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पर्साको वीरगज्जका २५ वर्षीय पुरुषको व्यवहारिसे शवको स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। जेठ २८ गते शव भेटिएपछि उनको स्वाब परीक्षण नारायणी अस्पतालमा गरिएको थियो। शुक्रबार उनको स्वाबको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। त्यसैगरी बाराको निजगढ नगरपालिका–६ का एक पाँच वर्षीय बालककको समेत कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। उच्च ज्वरोका कारण जेठ ३० गते वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा भर्ना भएका बालकको स्वाब संकलन गरेर नारायणी अस्पतालमा परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। कोरोना